SMT Packages - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Abanolwazi engaphezu kwengu-20 'kule mboni, singahlinzeka sokuma izixazululo amakhasimende kuhlanganise PCB bumbela, izingxenye izinto ezinhlelweni zokuthenga kanye nezinsizakalo PCB LoMhlangano. Ngenxa elawula imithetho yokukhiqiza neziqondiso, okwandisa ulwazi kwezobuchwepheshe kanye intshiseko alwele ubuchwepheshe bamuva, thina ezinqwabelene amakhono eziningi ukubhekana izinhlobo ezahlukene ingxenye amaphakheji ezifana BGA, PBGA, chip Flip, CSP futhi WLCSP.
BGA, iDemo ibhola igridi afanayo, kuwuhlobo SMT (Surface Mount Technology) iphakethe ukuthi ngokwethukela kusetshenziswa kakhulu ezifundeni edidiyelwe (ICS). BGA kuyazuzisa ngcono solder nokwethenjelwa ngokuhlanganyela.
BGA ubukisa izinzuzo ezilandelayo:
• Isicelo Eyonga PCB isikhala
BGA iphakethe izindawo uxhumano ngaphansi SMD (Surface Mount Kudivayisi) iphakethe esikhundleni emhlabeni ukuze isikhala kungenziwa kakhulu ezilondoloziwe.
• Ukuthuthukiswa ngokuya ukusebenza ezishisayo kagesi kanye
Njengoba BGA iphakethe kusiza ukuphungula inductance samandla phansi izindiza nezikhali impedance elawulwa isignali imigqa, ukushisa zingasuswa kude pad, nenzuzo ukufudumeza ukushabalalisa.
• Yandisa yokukhiqiza ezithela
Ngenxa intuthuko solder nokwethenjelwa, BGA singalondoloza isikhala elikhulu phakathi ukuxhumana kanye eliphezulu nokunamathisela ngomthofu.
• Iphakheji ukujiya ukunciphisa
We ngokukhethekile yokusingatha esihle izingxenye iphimbo inhlangano kuze kube manje singakwazi ukubhekana BGAs iphimbo lakhe ubuncane kungaba mncane 0.35mm.
Uma beka ngokugcwele ngokuphathelene ithuba Ukhiye PCB inhlangano ukuze BGA iphakethe, onjiniyela bethu ngeke, okokuqala, hlola amafayela akho PCB kanye BGA ishidi ukuze fingqa iphrofayela ezishisayo lapho izakhi kufanele kucatshangelwe ezifana nosayizi BGA , ibhola impahla njll Ngaphambi lesi sinyathelo, sizokwenza ukuhlola PCB yakho design BGA futhi unikeze isheke MAHHALA DFM baqaphe ezidingekayo PCB inhlangano kuhlanganise substrate impahla, ebusweni sekugcineni, soldermask imvume, njll
Ngenxa izimfanelo BGA iphakethe, Automated Optical Ukuhlolwa (Aoi) ehluleka ukuhlangabezana nezidingo ukuhlolwa. Thina ongalungisa BGA ukuhlolwa Automated-X-ray Ukuhlolwa (AXI) imishini uyakwazi ihlola ukukhubazeka nokunamathisela ngomthofu zisandakuqala ngaphambi ivolumu yokukhiqiza.
PBGA, iDemo plastic ibhola igridi afanayo, ingenye ethandwa kakhulu amafomu emaphaketheni kokuphakathi ukuba ephezulu ezingeni-I / O amadivaysi. Kuye laminate substrate equkethe izingqimba zethusi extra ngaphakathi, PBGA kuyazuzisa ukushabalalisa ukushisa futhi kungaba bamukele emikhulu umzimba osayizi kanye nenani amabhola ukuze kuhlangatshezwane ezahlukene ebanzi izimfuneko.
PBGA ubukisa izinzuzo ezilandelayo:
• Yokufuna inductance ongaphakeme
• Ukwenza ebusweni ukukhweza kulula
• Izindleko Ngokulinganiswa ongaphakeme
• Ukulondoloza nokwethenjelwa kuqhathaniswa eliphezulu
• Yenza uhlelo lokunciphisa nezindaba coplanar
• Ukuthola kuqhathaniswa ephezulu ezingeni ukusebenza ezishisayo kagesi kanye
Njengoba indlela uxhumano kagesi, i-chip flip uxhuma bafe kanye iphakethe substrate ngu ebhekene ngqo phansi IC ukuze wenze kube enamathiselwe substrate, wesifunda ibhodi noma inkampani yenethiwekhi. Uquketheni chip flip zihlanganisa:
• Yenza uhlelo lokunciphisa isignali inductance namandla / phansi inductanc
• Ukwehlisa inani iphakethe izikhonkwane kanye nosayizi die
• Ukwanda kokungabi isignali ukuminyana
CSP futhi WLCSP
Kuze kube manje, CSP kuyinto ifomu yakamuva iphakethe, iDemo chip isikali iphakethe. Njengoba incazelo igama layo kubonisa, CSP libhekisela iphakheji kabani sayizi esifana nesika-chip ne ukukhubazeka ngokuphathelene chips angenalutho iqedwe. CSP inikeza ikhambi emaphaketheni okungukuthi luthe ukuqina, kanti kulula, eshibhile futhi ngokushesha. Futhi izici ezilandelayo CSP kusiza kuholele elandayo labantu inhlangano ezithela aphansi yokukhiqiza izindleko.
CSP uyathandwa futhi esebenza kahle kule mboni ukuthi kuze kube manje sebengaphezu kuka-50 izinhlobo CSPs emndenini walo futhi nenombolo usakhula nsuku zonke. Baningi izimfanelo nezici CSP kukhona contributive ukuthandwa kwayo kabanzi kulo mkhakha:
• Ukuncishiswa usayizi iphakethe
CSP ungakwazi ukuthola kahle emaphaketheni njengoba eliphezulu 83% noma ngaphezulu, kakhulu kwabantu elandayo imikhiqizo.
• Self ukuqondanisa
CSP uyakwazi ukuzikhathalela kuqondaniswe e inqubo PCB inhlangano ukugelelza kangangokuthi kwenza SMT kulula.
• Ukungabi bikho imikhondo izimisele
Ngaphandle ukubamba iqhaza imikhondo bent, nezindaba coplanar zingancishiswa kakhulu.
WLCSP, iDemo esilucwecwana ezingeni chip isikali iphakethe, uhlobo wangempela CSP kusukela iphakethe kwalo okuphelele liveza ubukhulu chip ukuziphilisa. WLCSP libhekisela IC emaphaketheni ubuchwepheshe ezingeni esilucwecwana. Idivayisi ene WLCSP empeleni kuyinto bafa lapho uxhaxha uhlevane noma solder amabhola kuhlelwe i-I / O iphimbo, nezimfuneko bendabuko wesifunda ibhodi inhlangano izinqubo.
Izinzuzo WLCSP ngokuyinhloko zihlanganisa:
• inductance kusukela die ukuze PCB luncane;
• Usayizi Iphakheji ancipha kakhulu nge kwabantu degree ngcono;
• Isikhungo conduction ukusebenza kakhulu ngcono.
Kuze kube manje, sinekhono lokwenza ekubhekaneni WLCSP kabani kokubili ubuncane Phakathi-Die iphimbo kanye yonkana-Die iphimbo ongafinyelela 0.35mm.
0201 futhi 01005
Njengoba emakethe ngogesi kanye nemikhiqizo kusengaphambili, mkhuba elikhulayo miniaturization kwamaselula, laptops njll njalo ukushayela ngoba izingxenye nge osayizi amancane. Ukuze uxhumane lo mkhuba, siye senza imizamo ukwandisa ingxenye umhlangano namakhono kuze kufinyelele 0201 futhi 01005.
Kuze kube manje, kokubili 0201 futhi 01005 athandwa kakhulu emakethe electronic ngenxa izinzuzo ezilandelayo:
• Tiny usayizi abenze ngempela wamukelekile emikhiqizweni isikhala-sibambekile ekupheleni;
• ukusebenza nawufuna ukusebenza ngcono imikhiqizo electronic;
• Ihambisana nawo okusezingeni eliphezulu kwabantu nezidingo imikhiqizo yesimanje ngogesi;
• kakhulu ngesivinini izicelo.
Ukuze kuzuzwe inhlangano amakhono 01005, sike waphumelela ekubhekaneni izici eziphathelene inqubo yayo inhlangano kuhlanganise PCB design, izingxenye, solder unama, thatha kanye nokubekwa, ukugelelza, stencil bese kuhlolwa. 20+ yethu isipiliyoni seminyaka kusisiza fingqa ukuthi ngokuya nezindaba post-ukugelelza, uma kuqhathaniswa nabangu izingxenye nezinye izinhlobo amaphakheji, izingxenye zahlanganiswa ne 01005 basebente kancono udaba ukuqedwa ezifana ekuvaleni, itshe lethuna, onqenqemeni-ukuma, sibheke phansi, ulahlekile ingxenye njll
Singabantu ukusisingatha izinhlobo ezahlukene amaphakheji e PCB inhlangano inqubo kanye ukudlula ngenhla ehluleka ukubonisa yonke. Uma kudingeka ingxenye iphakethe ifomu lakho engashiwo ngaphezulu, sicela unganqikazi sifinyelele us at wonderful@wonderfulpcb.com ngoba yethu enwetshiwe iphakethe handling amakhono.